JD.com သည် Jingxi စီးပွားရေး အုပ်စု ကိုခွဲထုတ် လိမ့်မည် - Pandaily
JD.com သည် Jingxi စီးပွားရေး အုပ်စု ကိုခွဲထုတ် လိမ့်မည်
Jun 17, 2022, 12:39ညနေ 2022/06/17 14:09:09 Pandaily
တရုတ်နိုင်ငံ၏ e-commerce ပလက်ဖောင်း JD.com သည် မကြာသေးမီက အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းမှု အသစ်တစ်ခု ကိုစတင်ခဲ့သည်။ JD.com Retail ၏ Jingxi Business Group ကို ယခု လအတွင်း ခွဲထုတ် လိမ့်မည်။ မူလ စီးပွားရေး လိုင်း ကိုအခြား စီးပွားရေး အုပ်စု များနှင့် ပေါင်းစည်း ရန် မျှော်လင့်ရသည်။36krေသာၾကာေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
အထူးသဖြင့် Jingxi, Jingxitong နှင့် Jingxi တို့သည် Jingdong လက်လီ ရောင်းချ မှုတွင် ပေါင်းစည်း လိမ့်မည်။ ပေါင်းစည်း ခြင်းမပြုမီ Jingxi Business Group သည် ၀ န်ထမ်းများကို ရာထူးမှ ဖယ်ရှား လိမ့်မည်။
Jingxi စီးပွားရေး အဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းမှုကို သုတ် များဖြင့် ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ လက်ရှိတွင် Jingxi ၏စီးပွားရေး ညှိနှိုင်း မှုသည် ပေကျင်း နှင့် Zhengzhou တို့ ၏စီးပွားရေး ကိုသာ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားသည်။ အများဆုံး အချိန်တွင် Jingxi သည် နိုင်ငံတစ် ဝှမ်း ရှိ ပြည်နယ် ၂၀ ကျော်ကို လွှမ်းခြုံ ရန်ကြိုးပမ်း ခဲ့သည်။ ၎င်း ၏စီးပွားရေး နယ်ပယ် ကို ယခုနှစ် မတ်လတွင် ပေကျင်း၊ Shandong, Henan, Hubei နှင့်အခြား နေရာ များသို့ လည်း စာ ချုပ်ချုပ် ဆိုခဲ့သည်။
အစီရင်ခံစာ များအရ ဤ စီးပွားရေး တိုးတက် မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အမြတ်အစွန်း တိုးမြှင့် ပေး ရန်ဖြစ်သည်။ ဌာန တစ်ခုစီ ၏အနာဂတ် သည် ၆ ၁၈ စျေးဝယ် ပွဲတော် အတွင်း အမြတ်အစွန်း နှင့်နီးကပ်စွာ ဆက်နွယ် နေ လိမ့်မည်။ အရင်းအမြစ် တစ်ခုက “ဇွန် လကုန် မှာ JD.com Health, JD.com Industries နဲ့ JD.com Retail မှာ အကျိုးအမြတ် မယူ တဲ့ (သို့) အရှုံး ကို သင့်တင့် လျောက်ပတ် တဲ့ အဆင့် အထိလျှော့ချ နိုင်တဲ့ စီမံကိန်း တွေကို ဖြတ်တောက် ပစ် နိုင် တယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီ ၏ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် JD.com ၏စီးပွားရေး လည်ပတ်မှု အသစ် သည်ယွမ် ၁၀. ၆ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၅၈ ဘီလီယံ) ဆုံးရှုံး ခဲ့ပြီး JD.com ၏ထုတ်လုပ်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Jingxi ၊ ပြည်ပ စီးပွားရေး နှင့်နည်းပညာ ဆန်းသစ်တီထွင် မှုများအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
Jingxi ‘s Jingxi Piple သည် လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်အတွင်း အာရုံစိုက် မှုများစွာ ရရှိခဲ့သည်။ သတင်းရပ်ကွက် များ ၏အဆိုအရ ပေကျင်း ရှိ Jingxi ၏စီးပွားရေး သည် မြို့တော် တွင် အမြတ်အစွန်း ရရှိ ခြင်းကြောင့် ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားသည်။ Zhengzhou ရှိ ၎င်း၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သည် အရှုံးပေါ် နေသော်လည်း မြို့ တော်၌ ဖြန့်ဖြူးသော ပုံစံ အသစ် ကိုစမ်းသပ် နေသည်။ နှစ် နေရာ ၏စီးပွားရေး သည် အနာဂတ်တွင် ဆက်လက်တည်ရှိ မည် လား ဆိုသည်မှာ အမြတ် နှင့် ဆုံးရှုံး မှုအပေါ် မူတည်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:JD.com ရဲ့Jingxi Piple သည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ကိုလျှော့ချ မည်ဟု ကောလာဟလ များ ထွက်ပေါ် ခဲ့သည်
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် Jingxi Business Group ကိုတည်ထောင် ခြင်းသည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း JD.com ၏ မြို့ ငယ် များနှင့် ကျေးလက် စျေးကွက် များကို စူးစမ်း လေ့လာခြင်း ကိုပြသသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် April ပြီ လတွင် JD.com ကို တည်ထောင်သူ ရစ် ချ တ် လျူ က Weibo တွင် အဆင့်မြင့် ကြေငြာ ခဲ့ပြီး လာမည့် ငါး နှစ်အတွင်း JD.com သည် နိုင်ငံတစ် ဝှမ်း တွင် စတိုးဆိုင် ၁ သန်း ဖွင့်လှစ် မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဝက် မှာ ကျေးလက် ဒေသများ တွင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤ ရည်မှန်းချက် ချမှတ် ပြီးနောက် Jingxi သည် ကျေးလက် ဒေသများတွင် အသွင်ပြောင်း ထားသော စတိုးဆိုင် အရေအတွက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြား ခြင်းမရှိပါ။